Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny 2013 June 30
Septambra 2019 75 Lahatsoratra
Tantara tamin'ny 30 Jona 2013
Tovolahy iray no maty voadonan'ny fiara tao Ribeirao Preto ary ampolony maro no naratra tamin'ilay fifandonana tamin'ny polisy tao Brezila, Rio de Janeiro, ary tao Salvador satria efa maherin'ny iray tapitrisa ireo olona nidina an-dalàmbe teny amin'ireo tanàn-dehibe sy kely rehetra manerana an'i Brezila, io no hetsi-panoherana lehibe indrindra hita...
Mpanoratra Mong Palatino · Vietnam
Mpanoratra Madalitso Mwando · Afrika Mainty
Mpanoratra Lourdes Sada · Eoropa Andrefana
Leo ‘Voalavo’, Manohana An'i Morris – Saka Mpifaninana Ho Ben'ny Tanàna – Ireo Meksikana
Maneho ny fanohanany an'i Morris, saka izay "mifaninana" amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna ny 7 Jolay izao eo ambanin'ny teny filamatra “tsy hisy voalavo intsony”, ny vahoakan'ny fanjakan'i Veracruz. Na izany aza, misy ireo sasany mihevitra fa mety hanome tombontsoa ho anà antoko politika iray manokana io hetsi-panentanana io.
“Ianao No Firenena!”
Tsy endrika fahita matetika ho mpikambana mamokatra ao anatin'ny fiarahamonina ireo vitsika, vorona, ary lambo 3D... nefa, maninona moa? Mampiasa horonantsary fohy mampiala voly ny Hetsi-panentanana Wazi hanandratana fiarahamonina sivily mitambatra ao Kenya.
[Lahatsary] Ny Fomba Fampiasana Ny Rindrambaiko StoryMaker
Mpanoratra Eddie Avila · Fitaovana
namoaka lahatsary Youtube mampiseho torolàlana maneho miandalana ny fomba fampiasàna ny rindrambaiko StoryMaker ny Small World News, , izay fitaovana natao ho an'ireo mpanao gazety hamoronany ireo tatitrany manokana mikasika ny vaovao amin'ny alalan'ny fampiasana ny finday Android, amin'ny fomba azo antoka sy voaaro tanteraka.
Hita Ilay Peroviana Mahay Mandray Olona Indrindra
Mpanoratra Gabriela Garcia Calderon Orbe · Mediam-bahoaka
Marisol Rodríguez Gamero, mpianatra Lalàna, 23 taona, no nahazo tamin'ny fifaninànana "The kindest Peruvian" ( Peroviana mahay mandray olona indrindra) [es], hetsika iray hamporisihina ny Peroviana mba hampiseho toetra mendrika sy fihetsika mampisongadina ny hatsaran'izy ireo amin'ireo vahiny mpizaha tany.